China chada chaja chara, igwe oghere nke chaja, Foldable Mobile anyanwụ Charger Supplier
Nkọwa:Chaja chara chara,Chaja chara chara,Igwe chara chara nke nwere ike ịchọta,Onye chaja chara chara,,
Chaja chara chara,Chaja chara chara,Igwe chara chara nke nwere ike ịchọta,Onye chaja chara chara,,
Home > Ngwaahịa > Ike Ike Ike > Chaja chara chara
Ngwaahịa nke Chaja chara chara , anyị bụ ndị na-emepụta ọkachamara si China, Chaja chara chara , Chaja chara chara suppliers / factory, wholesale high-quality products of Igwe chara chara nke nwere ike ịchọta R & D and manufacturing, anyị nwere ọrụ zuru ezu mgbe-ahịa na nkwado teknụzụ. Le anya n'ihu na nkwado gị!
China Chaja chara chara Ngwa
Ngwa bụ isi nke chaja chara chara nke FIZZ GLOBAL bu nke a na-eji foldable bag.Solar foldable bag na-eji iji gbanwee ike anyanwụ n'ime ọkụ eletrik ma weghaa ngwaahịa dijitalụ site na ogwe igwe. O nwere uru nke ịpịgharị, obere na ihe ndị ọzọ, yana ịchọrọ eletrik na ihe dịgasị iche dị ka njem. Ike foldable ike anyanwụ bụ ihe ọhụrụ ọgbara ọhụrụ nke ntanetị nke anyanwụ, na-arụ ọrụ ngbanwe nke nwere ọgụgụ isi, nwere ike ịhazigharịa voltage dị iche iche na nke ugbu a. Ọ nwere ike ịgba ụgwọ ngwaahịa dị iche iche dị ka MP3.MP4.PDA, igwefoto dijitalụ na ekwentị mkpanaaka. Ike ikpo ọkụ nke anyanwụ dị obere n'ogo, elu na ikike na ogologo oge ndụ. Okwesiri maka ebe obibi njem njem, njem, ugbo di anya na ụgbọ mmiri, oru ubi, wdg, nakwa ebe mmanye nwere ike iche maka umu akwukwo.
FIZZ GLOBAL solar foldable ngwugwu nwere ike ahaziri dị ka ihe ndị ahịa chọrọ maka nha, wattage, ụdị dị iche iche nke anyanwụ, nọmba nchịkọta, ntinye mmepụta, ntanpụta mmepụta na mmepụta ndị ọzọ.